I-Demarai iGrey Childhood Story I-Untold Biography Facts
ikhaya IIMALI ZE-EUROPE I-Demarai iGrey Childhood Story I-Untold Biography Facts
Imivuzo kwi-PremierLeague kunye neTransferMarket
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leBhola leGenius eyaziwayo ngegama elithi "Ngwevu". Ibali lethu le-Demarai iGrey Childhood Story kunye ne-Untold Biography Facts ikulethe iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukusuka kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yentsapho, ibali lobomi phambi kobuqili, ukuphakama kwigama, ubuhlobo kunye nobomi bomntu njl.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nesantya sakhe, ukuhamba kunye nenqubo eyenza ibe ngumdlali webhola othe wuleza eNgilani. Nangona kunjalo, bambalwa abambalwa kwi-Biography ye-Demarai Gray enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwe-ado, masiqale.
I-Demarai iGrey Childhood Story I-Untold Biography Facts- Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Demarai Remelle Grey wazalwa kwi I-28th ngomhla kaJuni 1996 ukuya EBirmingham, eUnited Kingdom. Grey ivela kuye IJamaica sibonga ngabazali bakhe abaqhelisela iingcambu zaseJamaican. Oku kuthetha ukuba ufana nexesha lokubhala elifanelekileyo lokudlala eRamaica.
I-Demarai Gray ivela kwimvelaphi yentsapho ephakathi kunye neenkcubeko zaseBritish Jamaican ezingafani kakhulu nento ebonwa ngabanye baseBritish Jamaican njengaye; UDaniel Sturridge, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling, Kyle Walker, UDanny Rose kwaye Chris Smalling.
Udade weGrey - I-Credit kwi-Twitter
Ukukhula kunye nodadewabo onyana, uGrey waya kwiFransley High School apho waqala ukudlala ibhola lebhola ekhatywayo emva kokuba ehamba emva kweeyure zesikolo. Imisebenzi yebhola yasekuqaleni yahlawula igalelo njengoko iholele kumsebenzi.
I-Demarai iGrey Childhood Story I-Untold Biography Facts- Ubomi bokuqala
Ngaphambi kwexesha lakhe kunye neFransley High School, i-Demarai Gray yaqala ukudlala kunye neqela lakhe lezithili zasekuhlaleni, iCadbury Athletic yamaqela amancinane. Wenza impembelelo kunye neklabhu eyabangela ukuba anqobe ithuba lokufundela ngeBirmingham Academy.
I-Gray yajoyina i-Blues 'academy njenge-under-11. Uhla umgca, wadibana waza waba ngumhlobo UNathan Redmond lowo wayeyithatha njengento ebalulekileyo kumsebenzi wakhe wobutsha.
Uhlobo lwe-Demarai Grey ubuhlobo bakhe bokuqala noNathan Redmond. Imboleko kwiPinterest kunye neBirmingham Post.
I-Demarai iGrey Childhood Story I-Untold Biography Facts- Indlela eya kwigama
Ukuqhaqhazela, ukuzola kunye nolonwabileyo Grey waqhubeka ne-football scholarship kwaze kwaba yi2012. Ukusebenza kwakhe kwixesha elizayo (2013-2014) kwamfumana umdlalo we-Academy Player weNkqantosi yonyaka.
I-Demarai Grey Road eya kwibizo (I-Credit to BBC)
Ngaloo nyaka kwabona iGrey ukuba ikhuthazwe kwinqanaba lokuqala lokuqala laseBirmingham apho yaqalisa ukukhuphisana ukuba ibe ngumqali wokuqala.
I-Demarai iGrey Childhood Story I-Untold Biography Facts- Ukunyuka Kwigama
Ngethuba ngeliqela lokuqala leBirmingham, iGrey yaqala ukukhuphisana indima yokuqala yeqela kunye nowayekade e-United rejectee uFederico Macheda. Kwakukhuphiswano olusempilweni olwalubona iGrey ephuma kunye nokwenza iMacheda ephuma kwiklabhu.
Eli lixesha lokuba ulawulo lwebhulabhu yaseBirmingham lukholelwa ukuba wayebonisa ukukhula ngokomoya. I-Gray yaphula iirekhodi kule nkcukacha elandelayo 2014-2015 eyamjonga ukuba iphumelele amanqatha amathathu; Umdlali weBhola leLutsha Young ngenyanga yeDisemba 2014, iBirmingham City Iinjongo kunye nomdlali we-2014-2015 Ixesha.
Ukugqitywa kwegreyiti yeGrey kunye nokukwazi ukukhusela ekukhuseleni akuzange kubonwe ngqalelo kwi-Premier League ye-trophy iqhube i-Leicester City eyenze isigaba sayo sokukhululwa. I-Grey yajoyina ii-Champions League ngomhla we-4th kaJanuwari 2016 kwaye yanceda abo bahamba nabo bekhusele i-Premier League.
I-Demarai Grey ijoyina i-Premier League Holders (I-Credit ku-Premier League)
Bonke abanye, njengoko bethetha imbali.
I-Demarai iGrey Childhood Story I-Untold Biography Facts- Ulwalamano lobomi
Ngubani oDemarai Grey Dating?
I-Demarai Grey Girl-Inyaniso engeyiyo (Credit to Instagram)
Ukuthandana okufihlakeleyo kweGrey yinto engapheliyo kuluntu uluntu nje ngenxa yokuba ubomi bakhe bothando bubucala kwaye mhlawumbi kungabikho umdlalo. Grey njengokuba ngexesha lokubhala ligqibile ekubeni lingabonakali uluntu ngolwazi ngobomi bakhe bolwalamano.
Ngesinye isikhathi wanikezela i-interview yesicelo sokuphendula imibuzo ngomfazi wakhe. Ngezantsi yiseshoni yodliwano-ndlebe.
I-Demarai iGrey Childhood Story I-Untold Biography Facts- Inyaniso engekho
I-Day Demarai Gray ibuyile Ukufa:
Ubusazi?… I-Demarai Grey yahlambalaza ukufa emva kokuba iqule i-helicopter ngokuya e-Leicester City PA Awards.
Usuku lokufa lokuCima i-Demarai Grey (Credit to FameFlynet.uk.com)
Ngenxa yamandla emimoya yomoya, iBritish Jamaican yaxotshwa njengoko yayingena kwi-helicopter yomsila. Ukungenelela ngokukhawuleza kwelungu le-Helicopter liye lonceda ekukhuseleni ingozi ebulalayo. Jonga isiganeko sevidiyo.
Wakhe wangenelela i-Lethal Hippy Crack:
Isiganeko senzeke emva kokunqotshwa kweLeagueter yowunankulu ku-Everton. Kwakuyomzuzwana uBillingham owazalwa wazala ibhola ekwakheka i-nitrous oxide ebulalayo, eyaziwa ngokuthi 'hippy crack'.
I-Demarai Gray ifilimu ngokwenza i-Hippy Crack (Credit to isipili)
I-Grey emva kokuncedisa i-substance inqume ukuthumela i-video engabonakaliyo kwi-Snapchat yakhe.
Nangona, kungokomthetho ukufumana i-arti ephezulu yaseBrithani-anti-adware ixwayise ukuba ukunyusa igesi kunqanda ingqondo ye-oksijini kwaye inokubulala.
I-Demarai iGrey Childhood Story I-Untold Biography Facts- LifeStyle
Ukukwazi indlela yokuphila ye-Demarai Grey kwi-pitch ngokuqinisekileyo kunceda ukwakha umfanekiso opheleleyo.
Ngokutsho isipiliI-Premiership winner uDemarai Gray wagubha isihloko sakhe seNkulumbuso neLambo emnyama.
Akayena uhlobo lomdlali webhola lebhola ohlala kwiLiverish Lifestyle ebonakalayo ngokugqithiseleyo ngeemoto ezinobumnandi obuhle kunye nezixuku.
I-Demarai iGrey Childhood Story I-Untold Biography Facts- Ubomi bomntu
Nangona ufanele ufunde ngokuphambuka kwakhe okungalunganga kunye neephepha zokukhusela i-helicopter. Kodwa ukwazi impilo kaDemarai Grey kunokukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo. Ngaphambi kokuba siqhubeke, makhe sibuze umbuzo.
Ziziphi iimpawu eziza kwingqondo yakho xa ucinga ngebhola lebhola lezemidlalo namhlanje?
Usenokucinga ngobuntu obuqhakazileyo. Kodwa i-Demarai Grey ngumntu onentliziyo efudumele othanda ukutyhala ixesha kunye nemali ekwenzeni ihlabathi libe yindawo engcono.
Ubuntu be-Demarai iGrey (Credit to Instagram)
I-Grey ibilokhu ibandakanyeka kakhulu emsebenzini wothando. Uphakathi kwalabo abaphakamisa iimali kwizibhedlele zabantwana nokuthanda ukutyelela abagulayo. Ingumcimbi wexesha ngaphambi kokuba eze kwi-ambassador ye-UNICEF yase-UK.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda iNdaba yethu ye-Demarai Grey Childhood kunye ne-Untold Biography Facts. Ku LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
I-Andrej Kramaric Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Disemba 15, 2017
Oktobha 22, 2018